ट्राफिकको मनपरी चेकिङ |
ट्राफिकको मनपरी चेकिङ
13:15:41 | पूर्व बिचार मुख्य समाचार
पूर्वको ट्राफिक ब्यवस्थापन अस्तब्यस्त छ भन्दा फरक पदैन । सडक ब्यवस्थापनको जिम्मा पाएको ट्राफिक प्रहरी कमाउ धन्दामा छ त्यो पनि यर्थाथ हो ।
दैनिक सडक दुर्घट्नामा ज्यान गुमाउँनको संख्या बढ्दो छ । तर सडक दुर्घट्नाको विषयमा गम्भिर भई कारण खोज्न नसक्ने ट्राफिक प्रहरी चाडपर्वमा जरीवना काट्न रातो विल लिएर सडकमा जनता सँग दिनहु निहु मात्र खोजिरहन्छ । कुनै नयाँ कार्यलय प्रमुख आए लगातै सडकमा ट्राफिकको तामझाम सुरु हुन्छ तर एक वर्षमा कुनै नियम पालना हुदैन,अन्तःत प्रमुखहरु प्रहरीकै भाषामा खोका लिएर कुम्लोकुटुरो बोकेर बाटो लाग्छन त्यो वर्षेनी हुन्छ । अहिले पूर्वको सडकमा मनपरी ढंगबाट चेकिङ भईरहेको छ । जस्ले जहाँ पायो त्यहाँ चेकिङ गरीरहेका छन । ट्राफिक पोष्ट देखि जिल्ला हुदै क्षेत्रको चेकिङले सर्वसाधरण हैरान छन त्यो यर्थाथ हो ।
यसरी एक किलोमिटरमा एउटा चेकपोष्ट थापेर के जनतालाई दुख दिन खाजेको हो ? या चाडवाडमा कमाईखाने भाडो बनाउँन ? सडकमा जरीवना काट्दैमा के सवारी दुर्घट्ना राकिएला ? अभियुक्तहरु ५ सय देखि एक हजार सम्म जरीवना सकडमै काटेर छुट्ने प्रचलनले सवारी दुर्घट्ना कसरी रोकिएला ? सडकमा काट्ने ट्राफिकको विल कस्ले छपाउँछ ? यो प्रश्न अब गम्भिर हुन सक्छ । ट्राफिकको मनपरी चेकपोष्ट सँगै कतै जरीवना बापत थमाउँने रसिद पनि दुईनम्वरी त छैन ? हैन भने लामो समय देखि सडकमै जरीवना चै किन काटिन्छ ? बैक सिस्टममा गएर किन जरीवना काट्न सुरु भएन पूर्व क्षेत्रमा एसपी सायब ? कि कमाईखाने भाडो वनाईराख्न सडकमै विल थमाउँने हो । यो गम्भिर प्रश्न हो यसमा सरकारी निकायको ध्यान जानु जरुरी छ । जथाभावी विल थमाउँने ट्राफिक प्रहरीले विलको सदुपयोग गरेका छन कि छैनन् यस विषयमा प्रशासनले ध्यान दिनु जरुरी छ । जरीवनामा मात्र ध्यान दिनुको कारणले पनि ट्राफिक भित्र आर्थिक चलखेल छ भन्दा अन्यथा नहोला । ट्राफिकको कमजोर ब्यवस्थापनको कारण सडक दुर्घट्ना वढेको यथार्थ हो ।
थोत्रा र मनपरी कुदाईएका ठुला सवारीबाट मासिक रकम लिने र सानो सवारीलाई चेकिङको नाटक मात्र भएकै कारण पूर्वको ट्राफिक ब्यावस्थापन लामो समय देखि सुध्रिएको छैन । ट्राफिकले आफ्नो संगठनलाई चुस्त दुरुस्त वनाउँन सकेको छैन । केबल पैसा कमाउँन ट्राफिक अहिले ब्यस्त छ । ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो सेवाको गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । घुस नदिई कामै हुदैन भन्ने सर्वसाधरणको भनाईमा किन चुप छन त्यो निकाय ? अहिले पनि अधिकांस ट्राफिक प्रहरीमा सुधार आएको छैन वरु घमण्ड भने वढेको छ । समाजमा ट्राफिक प्रहरीहरु अहिले पनि सामाजिक भईसकेका छैनन् । तसर्थ ट्राफिक प्रहरीहरु सुध्रन आवाश्यक छ । घर सुधारेर मात्र सडक सुधारमा लाग्न यो पंत्तिकार ट्राफिक प्रहरी पूर्व क्षेत्रीय हाकिम राजकुमार लम्साललाई अनुरोध गर्छ ।
चोकमा उभिएर जाम खुलाउने, लाइसेन्स माग्ने, सवारीलाई व्यवस्थित गर्ने लगायतका काममा खटिने ट्राफिक र गाडी चालकबीच प्रायः विवाद र तनाव भैरहन्छ किन ? नियमविपरीत सवारी चलाउने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने, सवारी नियम पालना नगर्ने, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने, सवारी साधन चुस्त–दुरुस्त नराखी सञ्चालन गर्ने र लापर्वाहीपूर्वक सवारी चलाउनेहरुलाई कार्वार्ही किन हुदैन ? अहिले पनि ठुला ब्यावसायीको ट्रक ट्रिपरहरु वर्षे देखि रिनो नभई सञ्चालनमा आए पनि उनीहरुलाई कार्वार्ही नहुनुको कारण अािर्थक चलखेल हो त्यो बन्द गर्ने सक्ने हिम्मत ट्राफिक प्रहरी सँग छ ? चेकजााचले मात्र दुर्घटना न्यूनीकरण नहुने तथ्य प्रमाणित हुदै गएको छ । त्यस कारण जरीवनालाई भन्दा पनि ब्यावहारीक शिक्षालाई ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।
सबै सर्वसाधरण सँग रुखोे ब्यवहार हैन उनीहरुलाई नरम ब्यवहारमा ट्राफिक जनचेतना फैल्याउँनु सक्नु पर्छ । कमिसन खान जथाभावी जरीवना रसिद काटेर मात्र सडकको अस्तब्यस्त रोकिने पक्का छैन । ट्राफिक प्रहरी घमण्डी भएर सर्वसाधरणलाई रोडमा नै गाली गर्ने जस्ता कियाकलाप गर्छन । यसलाई रोक्न ट्राफिक प्रहरीको हाकिमहरुले ध्यान दिनु जरुरी छ । सडकमा बिहान सबेरै देखि मध्यरातसम्म देखिएका दृष्यहरूले ट्राफिक प्रहरी भित्र डरलाग्दो अराजकता र असुली अभियान चलेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ, यतिबेला । ‘पहिला मापसे सोध, त्यो नभए लाइसेन्स सोध, त्यसको पासोमा पनि नपर्ने रहेछ भने ब्लुबुक खोज, त्यसपछि पनि उम्किए नम्बर प्लेट र साइड लाइटमा खोट देखाऊ र असुली गर’ भन्ने अभियान चलाइएको छ, सडकमा । अहिले बजारमा थोत्रा गाडीहरु सर्वसाधरण वोक्न धेरै कुद्ने गरेका छन । सरकारी निर्णयअनुसार यस्ता थोत्रा गाडी सडकमा गुड्न दिनै नहुने हो ।
तर, कवाडीमा बेच्नुपर्ने हजारौ सार्वजनिक सवारी अहिले उपत्यकामा विद्यार्थी, कर्मचारी र सर्वसाधारण यात्रु बोक्ने काममा संलग्न रहेको छ । ज्यानमारा सार्वजनिक सवारी हटाउन चासो दिँदैन र विद्यार्थी तथा यात्रु बोक्ने जस्तो संवेदनशील काममा प्रयोग गर्न दिइन्छ ? यो विषयमा टाफिक नबोल्नुको कारण के ? यस विषयमा गम्भिर वनौ । लाइसेन्स वितरण प्रणाली, सवारी चेकजाँच, कारबाही, सडक संरचना, ऐन–कानुन सबैतिर समस्या छ । प्राविधिक ज्ञानविना निर्माण भएका ग्रामिण सडक अनगिन्ति छन । जसको अवस्था दयनीय । जनसख्याको चाप, पुराना गाडी, वेपरवाह चालक, ओभरलोड, धुलो र खाल्टा भएको मार्ग तर पनि सबै यात्रुलाई गन्तव्यमा पुग्नैपर्ने बाध्यता नेपालीको साझा समस्या बन्दै गएको छ यस्लाई नियन्त्रणका उपायका वारेमा वहष गदै सडक दुर्घट्ना न्युनिकरणको बाटो खोज्नुको सट्टा चेकिङलाई प्रथामिकता दिएर कमाउ धन्दामा नलाग्दा राम्रो हैन र एसपी सायब !
१८ जुलाई अर्थात “मण्डेला दिवस”
‘भदौ देखि बहुविवाह दर्ता नहुने’
सवारी दुर्घटना कम गर्न स्टिकर वितरण
लिम्बू भाषामा कक्षा ६ र ७ को पाठ्यपुस्तक निर्माण
एयरपाेर्ट र अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउन केन्द्र गुहार्दै बराहक्षेत्र
पब्लिक स्कुलकाे मैदान सुब्बाकाे पार्थिव शरिर राखेर श्रद्धाञ्जली दिइने, धरानमा २ दिन शाेक विदा
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयरकाे निधन
असारे खर्चकाे परिणाम अन्तिम दिन ३३ अर्ब भुक्तानी
बलात्कारको परिभाषा बदलिदै
झापाको नापी कार्यालयमा सीसी क्यामेरा
देशभर आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने चिकित्सक संघको घोषणा
ओझेलमा राँके मेला, राँके मेला धुमधामसँग लाग्दै
शक्ति गौचनले सन्यास दिने
पहिराेले घर भत्काउँदा नाबालक सहित ३ काे मृत्यु
शारीरिर अशक्त राजकुमारकाे अात्मविश्वास
जलवायु परिवर्तनले जलसुरक्षामा चुनौती
तराईका विपन्न परिवारलाई सुधारिएको चुलो वितरण
यसरी फेरियो सन्तबहादुरको जीवन
भियाग्रा भन्दा कडा घरेलु खानेकुरा
मेयर सुब्बाकाे पार्थिव शरीर धरान ल्याइयाे (भिडियाेसहित)
अब चालकले चप्पल लगाएर सवारी कुदाए कारवाही !